Articles tagged 'inauguration'
Six leaders attend Mugabe's inauguration 23 August 2013 HARARE - Only six out of 40 invited heads of State attended the swearing-in of President Robert Mugabe for a new five-year term in a massive stadium inauguration that was boycotted by his election rival. Chief Justice Godfrey Chidyausiku administered the oath of office on Mugabe, who pledged “...
Mugabe sworn-in for 7th term 23 August 2013 HARARE - President Robert Mugabe was sworn-in at the National Sports Stadium yesterday amid pomp and fanfare, promising to revive the economy and cooperating with his vanquished rivals. Mugabe, who is extending his 33-year-old rule with another five years, buried the hatchet with his political...
Inauguration 'may be farewell event for Mugabe' 23 August 2013 HARARE - Zimbabwe's President Robert Mugabe, who extended his 33 years in power yesterday, once quipped he would rule his country until he turned 100. Taking the oath for a fresh five-year term at 89-and-a-half, he is getting closer to reaching that goal. The inauguration ceremony at a 60 000...
Mugabe's big bash 22 August 2013 HARARE - President-elect Robert Mugabe will be sworn in as Zimbabwe's president today at the National Sports Stadium at a ceremony to be attended by several foreign leaders. Mugabe is desperate for a massive inauguration especially after his win was marred by allegations of vote rigging and af...
Tsvangirai not gracing Mugabe's inauguration 21 August 2013 HARARE - Outgoing Prime Minister Morgan Tsvangirai says he is not going to be part of the “charade” when president-elect Robert Mugabe takes oath of office at State House tomorrow. Mugabe's swearing-in ceremony had been stalled by Tsvangirai's election challenge in the Constitutional Court, wh...
Poll challenge scuttles Mugabe inauguration 13 August 2013 HARARE - President Robert Mugabe's inauguration following his disputed re-election in the just-ended harmonised polls has been stalled after Morgan Tsvangirai's Friday Constitutional Court (Con-Court) petition seeking to nullify the result. With Tsvangirai seeking to compel the country's top c...